लकडाउनमा मैले सबभन्दा बढी ‘मिस’ गरेको यहाँका गल्लीहरू हुन्। ती मान्छेसँगको भेटघाट हो। र, हप्तादिनमा पुग्ने रैथाने खाजाघरहरू हुन्। लकडाउनको ५० औं दिनमा मैले घरबाट निस्केर सहर चहार्ने मौका पाएको थिएँ। पिँजडाबाट मुक्त पन्छीझैं म पाटनका तिनै गल्लीहरूमा पुगेँ। दरबार स्क्वायरमा पहिलेजस्तो रौनक थिएन। मान्छेका स्पर्श र चहलपहल ती सम्पदाहरूले पनि ‘मिस’ गर्दा हुन्!
सुनसान दरबार स्क्वायर छिचोल्दै स्वठः पुग्दा ‘मास्टर बाजे’ सँग भेट भयो। मास्टर बाजे, अर्थात् रामप्रसाद अमात्य पाटनका मठ-मन्दिरबारे कथा सुनाउँछन्। रिपोर्टिङकै क्रममा मेरो उनीसँग चिनजान भएको थियो।
कान कम सुन्ने मास्टर बाजेले यसबीच ‘हेयरिङ-एड’ लगाउन थालेछन्। पहिले उनीसँग कथा सुन्दा एउटै प्रश्न बारम्बार सोध्नुपर्थ्यो। एउटा मन्दिरको कथा जान्न थप तीन-चार वटा मन्दिरको नालीबेली सुन्नुपर्थ्यो। अहिले उनीसँग दोहोरो संवाद सजिलो भएछ। अब उनी प्रश्नकर्ताको प्रश्न राम्ररी नसुनेर एकोहोरो कथा सुनाउँदैनन् होला!
आजकल त बाजेले पनि कथा सुन्नेहरू ‘मिस’ गर्दा हुन्! बाजेलाई भेटेपछि म गोल्डेन टेम्पल, नागबही लगायत ठाउँ डुल्दै पाटनको कुमारी बहाः (रत्नाकर महाविहार) पुगेँ।
यसपालि बहाः सुनसान थियो। कुमारी घर बन्द। माथि पूजा भइरहेको रहेछ। तल एक जना मात्र चिनेका गुठीयार भेटिए। मलाई देखेपछि उनले सोधे, ‘तपाईं किन आउनुभएको?’
मलाई यो प्रश्नले झस्कायो। पहिले लामो समयको अन्तरालमा बहाः पुग्दा बाजेहरू सोध्थे, ‘धेरै दिनपछि आउनुभयो त।’
मैले कुनै जवाफ दिन सकिनँ। सोधेँ, ‘यहाँ केको पूजा भइरहेको?’
लकडाउनका कारण गुठीपूजा सरेको रहेछ। ‘लकडाउन खुल्ने निश्चित छैन, पूजा त गर्नै पर्‍यो,’ उनले भने।
‘रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा पनि त तपाईंहरूले गर्नैपर्छ रे होइन?’
गत वर्ष रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा। फाइल तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी किम्बदन्तीअनुसार गुरू गोरखनाथले आफूलाई कसैले भिक्षा नदिएको झोंकमा सम्पूर्ण नागलाई वशमा लिएछन्। नागलाई वशमा लिएपछि देशमा वर्षा भएन। अनिकाल लाग्यो। त्यसपछि भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेव, तान्त्रिक बन्दोदत्त आचार्य र ललितपुरका ज्यापु ललितले आसाम गएर गोरखनाथका गुरू मच्छिन्द्रनाथलाई ल्याएछन्।